Indlela Omele Uzijonge Uze Uziphephe Iimpazamo
IMboniselo | No. 6 2017
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAukan IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBaoule IsiBashkir IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBiak IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChokwe IsiChol IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDigor IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGarifuna IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJavanese IsiKabiye IsiKazakh IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMapudungun IsiMarathi IsiMaya IsiMazatec (sesiHuautla) IsiMbunda IsiMongolia IsiMyanmar IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNahuatl (saseNorthern Puebla) IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgangela IsiNgesi IsiNias IsiNiuea IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPonapea IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiQuichua (SaseImbabura) IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSamoa IsiSango IsiSaramaccan IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTojolabal IsiTok Pisin IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrhobo IsiUruund IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWelsh IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
Indlela Ofanele Uzijonge Ngayo Iimpazamo
UDon noMargaret * bavuya kakhulu xa babeze kubonwa yintombi yabo kunye nentsapho yayo. Kwisidlo sabo sokugqibela ngaphambi kokuba bagoduke, uMargaret owayengumpheki owaziwayo, wenza isidlo esasithandwa kakhulu ngabazukulwana bakhe ababini, imacaroni necheese.
Wonke umntu wahlala etafileni. UMargaret wabeka ukutya. Wathi xa ekuvula, wothuswa kukubona icheese sauce kuphela. Wayelibele ukufaka imacaroni! *
Nokuba sineminyaka emingaphi okanye sekukudala sisenza loo nto, sonke siyazenza iimpazamo. Sisenokuthetha singacinganga, senze into lingekafiki ixesha layo okanye siyilibale. Kutheni sisenza iimpazamo? Sinokwenza ntoni xa siphazamile? Ngaba sinokukwazi ukuziphepha iimpazamo? Xa sizijonga ngendlela efanelekileyo, siza kukwazi ukuyiphendula le mibuzo.
SIMELE SIZIJONGE NJENGOTHIXO IIMPAZAMO
Xa senze kakuhle, siyakuvuyela ukunconywa. Xa senze impazamo, nokuba ayiqatshelwanga ngabanye, simele sizazi ukuba siphazamile. Loo nto ifuna ukuba sithobeke.
Xa sicinga ukuba sibhetele kunabanye, sisenokuzama ukuyenza ingabi namsebenzi impazamo esiyenzileyo, okanye sityhole abanye side siyiphike nokuyiphika. Loo nto idla ngokuba nemiphumo emibi. Isenokuhlala iyingxaki engalungiswayo, kutyholwe nabanye bengenzanga nto. Enoba singaphika kuye ngathi, simele sazi ukuba ekugqibeleni “ngamnye wethu uya kuziphendulela kuThixo.”​—Roma 14:12.
UThixo uzijonga ngendlela eziyiyo iimpazamo. Incwadi yeeNdumiso ithi uThixo “unenceba nobabalo”; “akayi kuqhubeka ehlab’ amadlala ngalo lonke ixesha, engayi kuhlala ecaphukile ukusa kwixesha elingenammiselo.” Uyazi ukuba asifezekanga kwaye siyazenza iimpazamo, ‘uyakhumbula ukuba siluthuli.’​—INdumiso 103:8, 9, 14.
Njengaye nawuphi na utata onenceba, uThixo ufuna abantwana bakhe abasithi bajonge iimpazamo njengaye. (INdumiso 130:3) ILizwi lakhe linamacebiso amaninzi nolwalathiso olunokusinceda sazi into emasiyenze xa siphazamile okanye kuphazame abanye.
IZINTO ESINOKUZENZA XA KWENZEKE IMPAZAMO
Xa umntu enze impazamo, udla ngokuchitha ixesha namandla akhe ekhangela umntu anokumtyhola okanye azithethelele. Kutheni ungasuki ucele uxolo kuloo mntu umkhathazileyo ngento oyithethileyo ukuze nihlale ningabahlobo? Ngaba kukho into oyenzileyo engafanelekanga efaka wena okanye omnye umntu engxakini? Kunokuba uzicaphukele okanye utyhole abanye abantu, kutheni ungazami ukulungisa loo ngxaki? Xa ume ngelithi loo ngxaki yenziwe ngomnye umntu, uya kuyenza ibe nkulu ngokungeyomfuneko. Kunoko yilungise, ufunde kuyo uze uqhubeke nobomi.
Xa omnye umntu enze impazamo, asithathi xesha ukumbonisa ukuba asiyithandanga into ayenzileyo. Kungasinceda kakhulu ukusebenzisa icebiso likaYesu Kristu elithi: “Zonke izinto, ngoko, enifuna abantu bazenze kuni, yenzani ngokunjalo nani kubo.” (Mateyu 7:12) Xa wenze impazamo, nokuba incinci kangakanani na, uye ufune abantu bakuvele okanye kude kube ngathi akwenzekanga nto. Ngoko kutheni ungabi njalo ke nakwabanye?​—Efese 4:32.
IMIGAQO ENOKUZINCIPHISA IIMPAZAMO
Esinye isichazi-magama sithi iimpazamo zibangelwa “kukungayiboni ngendlela eyiyo into, kukungazi yonke into ngayo nokungakhathali.” Asinakuyiphika into yokuba wonk’ umntu ukhe ayenze enye yezi zinto. Sekunjalo, asinakwenza zimpazamo zininzi xa sisebenzisa imigaqo yeZibhalo.
Omnye waloo migaqo ukwiMizekeliso 18:13, uthi: “Ukuba nabani na uphendula umbandela ngaphambi kokuwuva, bubudenge obo kuye nokuthotywa.” Xa uzipha ixesha lokuyiva kakuhle into uze ucinge ngento omawuyenze, awusoze uthethe ngokungxama okanye wenze ungacinganga. Ukuyimamela kakuhle into kubalulekile ukuze uyibone ngendlela eyiyo nokuze uphephe ukwenza impazamo.
Omnye umgaqo weBhayibhile uthi: “Ukuba kunokwenzeka, zamani ngokusemandleni enu, ukuba noxolo nabantu bonke.” (Roma 12:18) Yenza konke okusemandleni ukuze kubekho uxolo nentsebenziswano. Xa usebenza nabantu, bacingele, ubahloniphe, ubancome uze ubakhuthaze. Xa usebenzisana ngolo hlobo nabantu, naxa kukho othethe okanye owenze into engacinganga kunokuba lula ukuba axolelwe okanye kube ngathi akwenzekanga nto. Kwanezona ngxaki zinkulu ninokuzilungisa ngobubele.
Khawubone ukuba akukho nto intle onokuyifunda na kwimpazamo oyenzileyo. Kunokuba uzithethelele, khawujonge ukuba akukho phawu onokufunda ukuba nalo na. Ngaba kufuneka ube nomonde, ububele okanye ufunde ukuzibamba? Kuthekani ngokuthozama, uxolo nothando? (Galati 5:22, 23) Le nto iza kukunceda ungaphindi uyenze loo mpazamo. Zama ukungasoloko ucinga ngayo. Fumana indlela yokuhlekisa ngayo ukuze ukhululeke.
UKUZIJONGA NGENDLELA EFANELEKILEYO KUZA KUSINCEDA
Xa sizijonga ngendlela efanelekileyo iimpazamo, siza kuyazi into emasiyenze xa zenzekile. Siza kukwazi ukuzixolela, sixolele nabanye. Ukuba sizimisele ukufunda kwiimpazamo zethu, siza kuba zizilumko size sithandwe ngabantu. Siza konwaba kwaye asizi kucinga ukuba akukho yethu. Ukwazi ukuba nabanye bazama iindlela zokujongana neempazamo zabo kuza kusenza sisondele kubo. Okona kubaluleke nangakumbi kukuba, siza kuncedwa kukufunda ukuxelisa indlela uThixo asithanda ngayo nakulungele ngayo ukuxolela.​—Kolose 3:13.
Ngaba impazamo eyenziwa nguMargaret ekuthethwe ngaye ekuqaleni yayenza yangonwabi intsapho yakhe? Zange. Wonke umntu wasuka wahleka, noMargaret lowo, kwatyiwa oko kutya kungenamacaroni! Kwiminyaka emininzi emva koko, abazukulwana ababini bakaMargaret babalisela abantwana babo ngeso sidlo, bekhumbula indlela ababonwabe ngayo notatomkhulu nomakhulu wabo. Phofu yayiyimpazamo, engenzanga ngabom.
^ isiqe. 2 Amagama atshintshiwe.
^ isiqe. 3 Xa kusenziwa imacaroni necheese kuphekwa imacaroni ize igalelwe icheese sauce.
INQAKU ELINGUMXHOLO “Ndaphiwa Eyona Nto Izodlula Zonke”
INQAKU ELINGUMXHOLO Khangela Esona Sipho Siza Kuthandwa
INQAKU ELINGUMXHOLO Esona Sipho Sizodlula Zonke
Wayenjani Kanye Kanye UYesu?
Kutheni Zininzi Kangaka IiBhayibhile?
Kutheni Ningayibhiyozeli IKrismesi?
No. 6 2017 | Esona Sipho Sizodlula Zonke
IMBONISELO No. 6 2017 | Esona Sipho Sizodlula Zonke
Ukujongana Neempazamo Zakho